Maxaa roobka kalluunka iyo raha u dhaca. | Saadaasha Shabakadda
Dabeecaddu kama joojiso bini-aadamka layaabka bilowgiisa. Astaamaha dabiiciga ah ee aadka u daran Taasi waxay kaaga tagaysaa afkaaga oo furan iyo dhacdooyinka ugu yaabka badan. Roobka kalluunka iyo raha Waa dhacdo soo jirtay ilaa 200 AD. C ilaa waqtigaasna qaar iyaga ka mid ah ayaa dhacay taas oo kaa yaabinaysa runtii. In kasta oo ay badanaa jiraan roobab kalluun iyo rahyo ah, gooryaan iyo xitaa jiir ayaa sidoo kale la helay. Waxaa jira dad ku soo koobaya roobka xoolaha, maadaama aadan garanaynin halka lala yaabi karo.
Qoraalkan waxaan kuugu sheegeynaa dhammaan sirta ay ifafaalahan layaabka leh qarinayaan iyo asalka. Ma rabtaa inaad ogaato runta ka dambeysa roobka kalluunka iyo raha? Sii wad akhriska si aad waxbadan uga ogaato.
1 Xaqiiqada magaalada ama halyeey?
2 Kiisaska dhabta ah ee roobabka xoolaha
3 Ka faa'iideyso dhacdada
4 Qiyaasta roobka kalluunka iyo raha
Xaqiiqada magaalada ama halyeey?
In laga fikiro in xayawaanku da'ayaan gebi ahaanba waalan. Waxaa jira kuwa u nisbeeya roobka noocan ah wax rabaani ah. Nooc ciqaab ah oo ka timaadda xagga Eebbe (ama ilaahyo) oo inaga tuuray inaan dembiyadeenna kafaaraggudno. Kuwa kale ee shakiga qaba Waxay shaki ka qabaan jiritaanka roobabkan mana aaminsana. Midhaha dacaayadaha iyo halkudhigyada diimeed ee ku saabsan adeecida ilaahay ama ku dhawaaqida dhamaadka aduunka waxaa laga yaabaa inay sababaha abuurka noocaas ah u noqon karaan.
Si kastaba ha noqotee, waxaa jira markhaati iyo caddayn dhab ah in roobka kalluunka iyo rahyadu jiraan. 1997, kalluumeysato reer Kuuriya ah ayaa waxaa ku garaacay xayawaan barafoobay Taasi waxay toos uga timid cirka Dhicitaanka noocaas ah, kalluunku xawaare buu ku socdaa madaxa si adag ayuu u garaacaa, taasoo keenta miyir beelid toos ah. Kaluumeysatada ayaa labo maalmood suuxsaneyd waxaana dhaawac ka soo gaaray maskaxda. Labadiisii ​​asxaab iyo isaguba wuxuu ku andacooday in aan la soo weerarin sidoo kalena uusan wax kalluun ah oo saarnaa kayd ahaan Qofna ma sharixi karin sababta kaliftay in squid-kan barafoobay uu cirka ka soo dhici karo.
Waana in roobabkan xooluhu aysan ahayn halyeeyo reer magaal ah sidii looga bartay. Waxaa jira caddaymo badan oo si fiican loo diiwaangeliyey oo muujinaya xaqiiqda. Kiis gaar ah oo la duubay ayaa dhacay 2013. Wiil reer Brazil ah ayaa watay gaarigiisa markii, si lama filaan ah, Kumanaan caaro ayaa bilaabay inay samada uga soo dhacaan madaxiisa. Dhacdadani waxay dad badan ka dhigtay hadal la'aan kuwaas, iyagoo aan ogeyn sida ay wax u dhaceen, kaliya isku dayi kara inay sharxaan.
Dhacdo kale oo lagu dhajiyay New York Times Waxay dhacday markii markab kalluumeysi oo Ruush ah uu degay wax aan badnayn darteed iyo wax aan ka yarayn lo'da oo cirka ka soo dhacday. Sac maxay samada ka wadaa?
Kiisaska dhabta ah ee roobabka xoolaha
Dhibaatada dhacdooyinkan dhif iyo naadir ah ayaa ah inay ka buuxdo mala awaal suugaaneed waxaana jira been badan oo internetka ah oo ku saabsan diimaha. Khabiirka aftahaniga ah ee reer Griigga Athenaeus wuxuu ka hadlay casho sharafta ay culimadu u sameeyeen 200 AD.Waa cadeymaha ugu horeeya ee aan ka hayno dhacdadan aan caadiga ahayn. Casho sharaftaan wuxuu ku xaqiijiyay inay ahaayeen 3 maalmood oo roob kalluun wata. Intaa waxaa dheer, in Peloponnese sidoo kale waxaa jira sheeko halkaas oo la sheegay inay jireen daad daadad ah.
Dhawaan, 1578, waxaa la sheegaa in Bergen (Norway) waxaa ku dhacay duufaan jiir ah oo dahsoon. Ma ogi midka ugu daran saddexda roobab. Waxaan dooran lahaa jiirka, maxaa yeelay waxaa la hubo gudbinta cudurada.
1870, Pennsylvania, waxaa ka dhacay qubeys weyn oo ah snail in ka badan magaalada Chester. Kalluumeysatadu aad bay u badnaayeen waxayna ugu yeereen dhacdadan "duufaan ku dhex jirta duufaan weyn." Sannadkii 2007 ayaa maydhashada jellyfish laga duubay magaalada Bath.
Inbadan oo dhaweyd ayaa dhacay roob dixiryo iyo dirxi leh Louisiana 2007, Scotland waxay la mid noqotay iyadoo ciyaar kubada cagta ah ay dhaceysay 2011 iyo sidoo kale Norway sanadkii 2015. Dhamaan dhacdooyinkaan la duubay waxay cadeyn u yihiin jiritaanka roobabkan.
In kasta oo ay jiraan roobab kaladuwan, kuwa ugu badan waa raha iyo kalluunka. Roobab rahyo ah ayaa ka dhacay Gibraltar sanadkii 1915, magaalooyinka Nafplio iyo Serbia 1981. Qaar ka mid ah markhaatiyaasha roobabkan waxay cadeynayaan in xitaa raha aysan u ekaan kuwii u dhashay deegaanka. Tusaale ahaan, roobabkii ka dhacay Serbia, goobjooge ayaa xaqiijiyay in aysan jirin qoolley u dhalatay oo midabkeedu cagaar yahay, laakiin ay cirro yihiin oo ay xawaare badnaayeen.
Ka faa'iideyso dhacdada
Waxaa jira magaalooyin ka faa'iideysta noocan roobka xoolaha ah hadiyado cirka ka yimaad. Dalka Sri Lanka sanadkii 2014, waxaa lagu soo maydhay kalluun saqafka sare iyo jidadka magaalada. Dadka tuulada ayaa ka faa'iideystay hadiyaddaas si loogu dabaaldego iid kalluun miisaankiisu ka badan yahay 50 kg. Kalluunka ka badbaaday dayrta ayaa la soo ururiyay si hadhow loogu adeego cunno ahaan.
Wadamada kale sida Yoro (Honduras) sanad kasta laga bilaabo Maajo ilaa Julaay, goosashada weyn ee samada ka timaadda ayaa si xiiso leh loo sugayaa. Waana taas xitaa waxaa jira xaflad lagu xuso roobkan kalluunka. Calaamadda in dhacdadan aan caadiga ahayn ay dhici doonto waa daruur weyn oo mugdi ah oo sababi doonta duufaanka xoolaha. Roobkan mucjisada ah ayaa dadka degani u isticmaalaan inay ku karsadaan kuna dhex cunaan bulshada dhexdeeda.
Qiyaasta roobka kalluunka iyo raha
Sida wax walba (ama ku dhowaad wax kasta) noloshan, waa inaad sharraxdaa. Qiyaasta macnaha ugu badan ee ilaa hadda ka jirta jiritaanka roobabkan xoolaha waa taas waxaa nuugaya dabaylo duufaan xoog leh oo dhulka lagu sii daayay, socdaal fog.
Aragtiyaha muuqaalka leh ayaa meesha ka baxsan sida cadhada rabbaaniga ah, isku dayga dadka kale si looga takhaluso cuntada dheeriga ah ka hor inta aan loo safrin meeraha kale, iwm. Aragtida duufaanka waxaa lagu faallooday in xayawaanka qaar ay ka badbaadaan duufaanadan, kuwa kalena ay ku burburaan cadaadiska iyo xoogga dabaysha iyo kuwa kale, sababtoo ah heerkulka hooseeya ee ka dhacaya joogga sare, ayaa aakhirka qaboobaya.
Fikradayda, kiisaska qaarkood ee go'doonsan sida kuwa squid ee la qaboojiyay waxay noqon karaan natiijada qaar khaniisiin ah oo raaci kara diyaarado yaryar. Weligaa ma ogaan kartid waxa bani'aadamku diyaar u yahay inuu sameeyo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Kala bixid » Roobka kalluunka iyo raha